Mercato: Benzema inotonga kudzoka muL1 - TELES RELAY
HOME » pasi rose • UNES • PRESS REVIEW • KUCHOKURUKURWA KWENYANZERO YE AFRICA • SPORTS »Mercato: Benzema inorayira kunze kwekudzokera muL1
SYLVAIN DJOUMESSI 17 May 2019
Varaidzo shomanana yevabereki ye Karim Benzema vasati vemazororo. Munyori wemwaka wakagadziridzwa ku Real pasinei nematongo, vaFrance vakapa ndima (vashoma) purogiramu yeTV muFrance, iyo yaYann Barthes. Akabvunzwa pakati pezvimwe zvinhu pamusoro pezvimwe zvebasa rake, tricolor striker akarega kudzokera kuLigi 1, kusanganisira kubva kure.
"Ndiri mubato rakanakisisa munyika (Real Madrid). Zvakaoma (kudzokera kune kechikwata cheFrance), yakatsigira Karim Benzema. Ndiri kutsvaga iyo yakakwirira kwazvo. Uye muFrance, ndinongova neLyon sechikwata chemwoyo. Ndakasiya mufananidzo wakaisvonaka kwazvo ipapo. Ndinoshuva kuti igare saizvozvo "
Nhamo yose mafeni kuti Lyon aigona vanorota kuona KB9 kuuya kumba kwake 2 / 3 rapfuura gore basa panguva soro pamwero mushure Real. Asi Benzema achine nguva kushandura pfungwa dzake, uye ipapo pamwe Juninho chingaitika vabvume ndiani anoziva.
Vinicius Jr. kwete muBrazil